Ukuxoxisana noJohn Pinzon, uMqondisi Wezokumaketha wakwaPutumayo
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izingxoxo » Ukuxoxisana noJohn Pinzon, uMqondisi Wezokumaketha wakwaPutumayo
Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba Ze-Ecuador • Izingxoxo • Izindaba • Abantu • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba
Uhambo lukaPutumayo yihhovisi / umhlahlandlela wezokuvakasha osemthethweni esifundeni sasePutumayo esiseningizimu-ntshonalanga yeColombia emngceleni we-Ecuador. Banikela ngalo lonke uhlobo lolwazi mayelana nezindawo zokuvakasha futhi babheke phambili ekuqiniseni ezokuvakasha ePutumayo.
.Uhambo: Ubani u-putumayo.travel futhi uzinze kuphi?
Ukuhamba kukaPutumayo yiwebhusayithi yezokuvakasha ephethwe yithi, InfoCASE Colombia, Ingeniería de Software, EU Sizinze eFlorencia - Caquetá Colombia.
Ukuvakasha: Obani abantu obhekiswe kubo? Yini okulindelwe lapho bevakashela isayithi lakho? Ingabe ungumqondisi osemthethweni noma uyathengisa izinkambo nemisebenzi?
Izithameli zethu esiqonde kuzo yilabo abanentshisekelo yokuhamba nokwamukela imvelo nokuzidela. Sifuna ukubanikeza lonke ulwazi lokuvakasha abaludingayo ngePutumayo kanye nohambo lwamaphakeji kanye nemisebenzi ye-adventure enjengokuthuthwa kwamanzi, ukukhunjulwa, ukuqhwagwa kwamanzi amhlophe, ukuhamba ngezinyawo, ukuhamba izintaba nokunye.
Ukuvakasha: Ungabuchaza kanjani ubunikazi bakho bebhizinisi futhi yiziphi izindinganiso zakho eziyinhloko?
Njengoba ngike ngasho phambilini, i-InfoCASE Colombia, Ingeniería de Software, i-EU, iyinkampani ezibophezele ekwakhiweni, ekwabelweni nasekusebenzisweni kobuchwepheshe bolwazi kanye nezokuxhumana ezinkampanini ezincane, ezincane, eziphakathi nezikhulu, kanye nokuxhasa izinqubo Zokucwaninga Nokuthuthukiswa Kwezobuchwepheshe ( I + D) futhi bengisebenza ukuqinisa nokunikeza amandla imikhakha ehlukene yezomnotho wesifunda.
Sinezindinganiso ezi-5 eziyinhloko:
- Yiba ne-Adventurous, Creative, ne-Open-minded
- Yakha Ubudlelwano obuvulekile nobuthembekile ngokuxhumana
- Be Passionate futhi uzimisele
- Yamukela neDrayivu Guqula
- Phishekela Ukukhula Nokufunda
Ukuvakasha: Ake sikhulume ngohambo lwezindawo zokuvakasha nezindawo ozikhangisayo kusayithi lakho? Ngabe iColombia, futhi ikakhulukazi uPutumayo, iyindawo enobungani yomndeni?
UPutumayo ungumnyango waseColombia. Igama elithi putumayo livela ezilimini zesiQuechua. Isenzo p'utuy sisho "ukuphuma" noma "ukuqhuma," futhi mayu kusho umfula. Ngakho, lisho “umfula ogelezayo.” Indawo ephelele yalo mhlaba omangazayo ingama-24,885 km2. Ngakho-ke, njengoba ubona kuningi ongakuvakashela futhi ongakunikeza ngoba i-hydrography yayo iyamangalisa ngokuphelele ngenxa yemifula, amachibi nezimpophoma, izilwane zayo nezimbali zayo kuhlukile futhi kuyathakazelisa, futhi i-gastronomy yayo iyinhle. Esikwenzayo ukuhlanganisa nokwakha amaphakheji angabizi futhi alungele zonke izinhlobo zezivakashi namaqembu eminyaka yobudala, kubandakanya nemindeni.
Ukuhamba: Ungachaza ngomusho owodwa ukuthi kungani abahambi kufanele bavakashele eColombia nasePutumayo ngo-2018?
Uma ufuna ukudala izinkumbulo ezingenakulibaleka, hamba uye ePutumayo bese unyuka uye ezimpophomeni "Zokuphela Kwezwe", ngohambo lwempilo yakho yonke.
Ukuvakasha: Yikuphi ukuthambekela nentuthuko okuthinta umkhakha wezokuvakasha kanye nebhizinisi lakho namuhla?
Izitayela eziyinhloko ezinomthelela emkhakheni wezokuvakasha ebhizinisini lethu yilezi:
Imvelo: Manje sesisukile kwezokuvakasha ezijwayelekile saya kwi-Ecotourism. Abanye ochwepheshe balinganisela ukuthi i-ecotourism manje imele u-11.4% wayo yonke imali esetshenziswa ngabathengi. Kubaluleke kakhulu ezinkulungwaneni zeminyaka ukugcina ifa lemvelo ligcinwe kahle njengesihluthulelo sabezokuvakasha, kulandelwa ukubuka izimbali / izilwane, okuhlangenwe nakho kwempilo yangaphandle ezindaweni zemvelo ezivikelwe, nendawo yokuhlala maphakathi nemvelo
Ukuvakasha Kwezokungcebeleka: Ikhula ngokushesha emakethe yethu. Imisebenzi efana nokuhamba ngezinyawo, ukuhamba izintaba, ukuhamba ngesikebhe, ukuhamba ngesikebhe, ukukhumbula kabusha, ukwenza i-rafting, nokufaka uziphu manje sekumile emakethe yezokuvakasha.
Ukuvakasha: Isu eliphumelelayo lokukhuthaza ezokuvakasha lidinga ukuba newebhusayithi ekhangayo nephumelelayo. Ihlukanisa kanjani iwebhusayithi yakho?
Iwebhusayithi yethu ihlukile ngenxa yengqikithi kaPutumayo futhi inemininingwane efanele ukuhlanganisa zonke izidingo zezivakashi kule ndawo, kungakhathalekile ukuthi zingakanani ubudala kanye nezinto abazithandayo. Sinikeza imininingwane eyigugu.
Ukuvakasha: Wathola kanjani futhi nini mayelana nohambo futhi waqala ukusebenza nathi?
Besazi ngaleso sikhathi ukuthi izizinda ze-.travel zazibaluleke kakhulu ukwamukelwa emphakathini wezokuvakasha nezokuvakasha. Ngakho-ke, asimisanga ukucabanga ngezinye izinketho, saqonda ngqo kuzitholela isizinda sethu .travel.
Ukuvakasha: Ukukhetha isizinda / umkhiqizo ofanele kwi-inthanethi yisinyathelo sokuqala sempumelelo eku-inthanethi. Ngokubona kwakho, yiziphi izinzuzo ezinkulu ezinikezwa isizinda se-.travel kuwebhusayithi yakho, ibhizinisi lakho nendawo oya kuyo?
- Ukuvuma okunikeza ibhizinisi.
- Ithuba lokuchaza ubunikazi bethu bezokuvakasha kwi-Intanethi.
- Ithuba lokwenza iPutumayo yaziwe emhlabeni wonke.
- Ukusiza ngokukhula kwenkampani yethu.